प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको पुस्तकालय भवन उद्घाटन – ::नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान::
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको पुस्तकालय भवन उद्घाटन
वि.सं. २०७५ असार २६ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको तीनतले पुस्तकालय भवन र प्रज्ञा आधुनिक छापाखानाको उद्घाटन गर्नुभयो । २०५ औँ भानुजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभएको हो । पुस्तकालय भवन उद्घाटन गर्दै उहाँले आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नेपाललाई भाषिक सूत्रमा बाँध्ने काम गरेको बताउनुभयो । आचार्यले नेपाली भाषा र साहित्यमा र्पुयाएको योगदान बिर्सन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल आर्थिक रूपमा पछाडि रहे पनि कला, संस्कृतिमा धनी रहेको दाबी गर्नुभयो ।
‘हाम्रो सहरका झयालढोकादेखि भित्ता पनि कलामय छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाललाई अगाडि ल्याउन नेपालको प्राज्ञिक, सांस्कृतिक, कला र शिक्षा क्षेत्र विकास गरी अगाडि ल्याउनुपर्छ ।’ विश्वको हाइट अर्थात् सगरमाथा र लाइट अर्थात् गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालमै रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली कलासंस्कृति बलियो पार्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पूर्वाधारको विकाससँगै प्राज्ञिक क्षेत्रको गतिविधि बढाएर संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । १२ वटा कोठा रहेको तीनतले भवनमा किताब, अध्ययन कक्ष र विद्युतीय पुस्तकालय छन् ।
पुस्तकालयले संस्कृति र साहित्यबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न भूमिका खेल्ने प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले बताउनुभयो । नवनिर्मित भवनले भारत र नेपालका अनुसन्धानकर्ता तथा प्राज्ञलाई खोज तथा सन्दर्भसम्बन्धी सुविधा प्रदान गर्ने भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले बताउनुभयो ।
पुस्तकालयमा भाषा, संस्कृति र अन्य विषयका करिब ४० हजार पुस्तक रहेको प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव प्रा.डा. जीवेन्द्र देव गिरीले बताउनुभयो । कार्यक्रममा डा. देवी नेपाल र प्रभा भट्टराईले भानुभक्तकृत कविता सुनाउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभएको सो पुस्तकालय भवन मित्रराष्ट्र भारतको ४ करोड ३९ लाख ४० हजार रूपैयाँ सहयोगमा निर्माण भएको हो । उद्घाटन समारोहमा सहरी विकास, संस्कृति, नागरिक तथा पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू, सामाजिक अगुवालगायतको व्यापक उपस्थिति थियो ।
नवनिर्मित उक्त पुस्तकालय भवनले भारत र नेपालका अनुसन्धानकर्ता तथा प्राज्ञहरूलाई खोज तथा सन्दर्भसम्बन्धी सुविधा प्रदान गर्ने बताइएको छ । पुस्तक प्रकाशनका लागि पुस्तकालयमा उच्चस्तरीय अफसेट प्रेसको सुविधासमेत रहने छ भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले उक्त पुस्तकालयलाई डिजिटल पुस्तकालयको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त पुस्तकालयले भारत र नेपालबीचको मैत्री सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने मात्र नभई दुवै देशका कलाकार तथा प्राज्ञबीच दरिलो सम्बध विकास गर्न पनि मद्दत गर्ने सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ ।
सन् १९५७ मा स्थापित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भारत साहित्य एकेडेमीको समकक्षी संस्था हो । नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको प्रतिष्ठान राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गतिविधिहरूलाई समन्वय गर्दै भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन, खोज र सांस्कृतिक एवम् बौद्धिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि समर्पित प्रमुख राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा पनि चिनिँदै आएको छ ।